Ibonwe kangaphi 952 (Ama)Ixesha #UThixo uElohim #Ukushumayela
Okukhona Ufunda NgoThixo, kokukhona Uya Umthanda
Singamthanda uThixo xa sifunda ngokuchanekileyo Ngaye kanye njenge-entomologist eyathanda iimbovane eyayizithiyile ngaphambili kunye noMpostile uPawulos noPetros abatshintsha ubomi babo emva kokwazi uYesu.
Abantu beBandla LikaThixo Bathanda uThixo
Kubomi bethu bemihla ngemihla, sihlala siphoswa ngamathuba ngenxa yokuswela kwethu ulwazi ngawo. Ngokufanayo, abantu abaninzi balahlekelwa lithuba lokuthanda uThixo ngenxa yokuswela ulwazi ngeBhayibhile. Kuyimfuneko ke ukushumayela ebantwini ngoKristu Ahnsahnghong kunye noThixo uMama abavele kwiLixa loMoya Oyingcwele.
Masikwazi ke, masikusukele ukumazi uYehova; ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokuphuma kwesifingo, ukuba eze kuthi njengemvula, njengemvula evuthisayo, elinyakamisayo ilizwe.
Abo Bakwaziyo Ukuliva ILizwi likaThixo